केन्द्र सार्न नदिन पर्साका तीन गाउँपालिकामा आन्दोलन,गाउँपालिका उपाध्यक्ष नै आन्दोलनमा | Sabaiko Online
Home Flash News केन्द्र सार्न नदिन पर्साका तीन गाउँपालिकामा आन्दोलन,गाउँपालिका उपाध्यक्ष नै आन्दोलनमा
केन्द्र सार्न नदिन पर्साका तीन गाउँपालिकामा आन्दोलन,गाउँपालिका उपाध्यक्ष नै आन्दोलनमा
केन्द्र परिवर्तनको विरोधमा पर्साका तीन गाउँपालिकामा आन्दोलन सुरु भएपछि कामकाज ठप्प भएको छ । ठोरी, सखुवा प्रसौनी र विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा पुरानो केन्द्रका स्थानीयले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
ठोरी गाउँपालिकाले घ्याङडाँडामा केन्द्र सार्ने निर्णय गरेपछि सुवर्णपुरबासी डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् ।
विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका कार्यालयमा दुई वडाध्यक्षसहित स्थानीयले २० दिनदेखि लगाएको ताला अझै खुलेको छैन । सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको निर्णय गरेको भन्दै गाउँपालिका उपाध्यक्षले नै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र बहुमतले नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही प्रावधानअनुसार नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका तीनवटै गाउँपालिकामा तनाव सुरु भएको हो । पर्सामा १४ स्थानीय तह छन् ।
सबैभन्दा पहिले १५ माघमा ठोरी गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभाले सुवर्णपुरमा रहेको सेवाकेन्द्र वडा नं ४ घ्याङडाँडामा सार्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट १६ माघदेखि सुवर्णपुरबासी संघर्ष समिति नै गठन गरेर अनिश्चितकालीन तालाबन्दी र प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
सेवा केन्द्र गाउँपलिकाको बीचभागमा हुनुपर्ने माग राखेर ठोरी गाउँपालिका वडा नं ३ ब्रह्मनगर पनि संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा थिए ।
शुक्रबार भएको वार्तामा स्थानीय तहमा प्राप्त हुने सेवा कार्यालयहरू समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने सहमतिपछि उनीहरूले सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको ठोरी गाउँपलिकाका प्रवक्ता रामप्रकाश कुँवरले बताए ।
सुवर्णपुर संघर्ष समितिसँग बीचमा पटक–पटक भएको वार्तामा सहमतिनजिक पुगेको भए पनि कार्यदलमा सहमति नजुटेपछि सुवर्णपुर संघर्ष समितिले बुधबारदेखि पुनः अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेको छ ।
२२ फागुनमा भएको वार्तामा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र संघर्ष समितिको वार्ताटोलीबीच गाउँसभाको निर्णयबाट उत्पन्न असन्तुष्टि समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न १३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । संघर्ष समितिको आह्वानमा सुवर्णपुर चोकमा रिले अनशन जारी छ ।
वार्तामा भएको सहमतिअनुसार स्थानीय सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएकोले पुनः आन्दोलनमा फर्किन बाध्य भएको सुवर्णपुर संघर्ष समितिका संयोजक जरी लामाले जानकारी दिए ।
तर, गाउँपालिका अध्यक्ष पिएल श्रेष्ठले सुवर्णपुर ठोरीको सबैभन्दा पूर्वमा पर्ने हुँदा पश्चिमका जनतालाई अपायक भएकाले केन्द्र सार्ने निर्णय गरिएको बताए ।
उता, विन्दबासिनी गाउँपालिकाले वडा नं २ बहुअर्वास्थित भाडामा रहेको सेवा केन्द्र सार्न खोजेको भन्दै वडा नं १ र २ का अध्यक्षहरूले १२ फागुनमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीलाल साह मोदीले गोप्य रूपमा वडा सदस्यहरूको घर–घरमा गई नेपाली कागजमा सही गर्न लगाएर केन्द्र अन्य वडामा सार्न खोजेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
पाँचवटा वडा रहेको विन्दबासिनीमा तीनवटा वडाका प्रतिनिधि केन्द्र सार्ने पक्षमा छन् । वडा नं २ का अध्यक्ष सञ्जय चौहानले गाउँसभामा जानकारी नगराई गोप्य रूपमा केन्द्र सार्ने निर्णय गर्न खोजिएकोले विरोधमा उत्रनुपरेको बताए ।
‘गाउँसभामा जानकारी नै नगराई घर–घरमा गएर सही गराएर केन्द्र सार्न खोजिएको सूचना पायौँ ।’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले कार्यालयमा तालाबन्दी ग-यौँ ।’
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जयसवालको अगुवाइमा केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको भन्दै वडा नं. २ का स्थानीयले कार्यालयमा ताला लगाएका छन् ।
२६ फागुनको गाउँसभाले गाउँपालिकाको नाम पारसनाथ राख्ने र केन्द्र वडा नं ४ सोलखपुर लैजाने निर्णय गरेको थियो । स्थानीयको आन्दोलनलाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष फुलमति देवीले पनि साथ दिएकी छन् ।
सहमतिमा गरिनुपर्ने निर्णय गाउँपालिका अध्यक्षले मनोमानी ढंगले गर्न थालेपछि आफू जनताको साथमा गएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष फुलमति देवीले बताईन् । ‘आमजनताको चित्त नबुझाई गरिएको निर्णय मान्न सकिन्न,’ उनले भनिन् ‘जनताको मतले जितेर आएकी हुँ म जनताको भनाइअनुसार नै जान्छु ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप जयसवालले भने ऐतिहासिक धार्मिकस्थल भएकोले गाउँपालिकाको नाम पारसनाथ राखिएको स्वीकार गरे । उनले केन्द्र पनि सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा सारिएको बताए ।
‘कांग्रेस र एमालेका नेताहरू र गाउँका अगुवा भन्नेहरूले राजनीतिक रंग दिएर विरोध गर्न लगाएका हुन्,’ उनले भने, ‘हामीले त ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय गरेका छौँ ।’
ठोरीमा डेढ महिनादेखि आन्दोलन
ठोरीको १५ माघमा बसेको पहिलो गाउँसभाले सुवर्णपुरमा रहेको सेवाकेन्द्र घ्याङडाँडा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट १६ माघदेखि सुवर्णपुरवासी संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गाउँपालिका र स्थानीयबीच पटक–पटक भएको वार्ता असफल भएको छ । संघर्ष समितिको आह्वानमा सुवर्णपुर चोकमा रिले अनशन जारी छ । सुवर्णपुर बजार अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गरिएको छ ।
गाउँपालिका कार्यालयमा वडाध्यक्षले नै लगाए ताला
विन्दबासिनी गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीलाल साह मोदीले गोप्य रूपमा केन्द्र सार्न खोजेको भन्दै वडा नं. १ र २ का अध्यक्षले कार्यालयमा ताला लगाएका छन् ।
वडा सदस्यहरूको घरघरमा गई नेपाली कागजमा सही गर्न लगाएर कार्यालय अन्य वडामा सार्न खोजेको वडा नं. २ का अध्यक्ष सञ्जय चौहानको आरोप छ । गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी भएपछि १२ फागुनयता सबै कामकाज ठप्प छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष नै आन्दोलनमा
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र अध्यक्ष प्रदीप जयसवालले मनोमानी ढंगले परिवर्तन गरेको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष फूलमति देवी नै आन्दोलनमा उत्रिएकी छिन् ।
नाम र केन्द्र परिवर्तनको विरोधमा उत्रिएका वडा नं. २ सखुवा प्रसौनीका स्थानीयलाई उनले साथ दिएकी हुन् । उनको अगुवाइमा गाउँपालिका केन्द्रमा ताला लगाइएको छ ।
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र अध्यक्ष प्रदीप जयसवालले मनोमानी ढंगले परिवर्तन गरेको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष फूलमती देवी नै आन्दोलनमा उत्रिएकी छिन् । उनको अगुवाइमा गाउँपालिका केन्द्रमा ताला लगाइएको छ ।नयापत्रिका दैनिकवाट